103 jir u dhashay Ugandha oo 158 caruur ah dhaley, 20 haween ah guursadey – SBC
103 jir u dhashay Ugandha oo 158 caruur ah dhaley, 20 haween ah guursadey
Jack Kigongo uu u dhashay wadanka Ugandha ayaa loo aqoonsadey ninkii Aabaha ama awowga u ahaa qoyska ugu balaaran ee dalkaasi kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 500 qof.
Jack oo ku geeriyooday da’da 103 sano ayaa guursadey 20 xaas waxaana ay u dhaleen 158 caruur ah , iyadoo xaasaskiisa tan ugu weyn ay jirtey 60 sano halka tan ugu yarna ay aheyd 15 sano jir markii uu guursanayey sida uu daabacay wargeyska The New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee caasimada wadanka Ugandha.
Ninkan ayaa la sheegay in uu noqdey ninkii ilmihii badnaa aabe u noqda dalka Ugandha, waxaa la sheegay in uu caan ka noqdey dalkaasi isagoo degaanaa deegaanka Kateera.
Jack Kigongo waxyaabaha lala yaabay waxaa ka mid ahaa in uu ilmihiisa u sameeyey dugsi gaar ah oo hoose oo ay wax ku bartaan, iyadoo dugsi dhexe oo deegaankaasi ku yaal oo ay dhigan jireen 130 ardey ay 80 ka mid ahaayeen ilmihiisa.
Ninkan oo horey uga mid ahaa ciidamadii oo ahaa askartii ka qayb qaadatey dagaalkii labaad ee dunida isagoo dhaqaale uu ka helay shaqadaasi ciidan ilmihiisa ku koriyey, isagoo u dhisay laba guri, mid ka mid ah labada guri ayaa waxaa deganaa 12 xaas halka kan kale ay deganaayeen sideed xaas.
Patrick Bulira Kigongo oo uu Aabe u ahaa Jack wuxuu sheegay in dagaaladii 80-meeyadii ka dhacay dalka Ugandha gaar ahaan kii NRM/NRA ay dhibaato ka soo gaartey qoyskooda isla markaana la bililiqeystey beero iyo hanta kale oo ay alaaheeyn ,isla markaana dagaaladaasi sokeeye ee dalka Ugandha ka dhacay ay ku dhinteen 20 ka mid walaalihiis.
Sadex ka mid ah ilmihii uu ka tagey Jack ayaa haatan ka mid ah ciidamada Ugandha kuwaasi oo saraakiil ka ah ciidamada.